फ्रिजमा अन्डा राख्ने गर्नु हुन्छ ? यो पढे पछि पक्कै पनि राख्नु हुन्न - ज्ञानविज्ञान
फ्रिजमा अन्डा राख्ने गर्नु हुन्छ ? यो पढे पछि पक्कै पनि राख्नु हुन्न
Don't Miss it चम्चाको माध्यमद्वारा एक मिनेटमै थाहा पाउनुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था
Up Next हतार गरेर खाना खानुहुन्छ ? यी कुराहरु थाहा पाइराख्नुहोस्
मैदाबाट बनेका खानेकुराको अधिक सेवनले तौल बढ्ने समस्या अधिक हुन्छ । मैदाको अधिक प्रयोगले रगतमा कोलेस्टेरोल बढ्नुुका साथै ट्राइग्लिसराइडको तह…
बहिरोपन र एसको समाधान
बहिरोपन मान्छे को कानले सुन्न नसकेको अवस्था हो। यदि मानिस अाफ्नो कानले कुनै पनि अावाज सुन्न वा पहिचान गर्न असहमर्थ…